Erling Haaland oo hoggaaminaya saddex xiddig oo ay Chelsea dooneyso inay dhammeystirto saxiixooda xagaagan - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Erling Haaland oo hoggaaminaya saddex xiddig oo ay Chelsea dooneyso inay dhammeystirto saxiixooda xagaagan
June 8, 2021 at 10:44 Erling Haaland oo hoggaaminaya saddex xiddig oo ay Chelsea dooneyso inay dhammeystirto saxiixooda xagaagan2021-06-08T10:44:04+02:00 CAYAARAHA
(London) 08 Juun 2021. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa diiddan inay ka quusato saxiixa weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund ee Erling Haaland, waxaana uu qayb ka yahay saddex ciyaaryahan oo uu Tababare Thomas Tuchel ka dalbaday inay kooxdiisa lasoo saxiixato.
Blues ayaa muhiimadda koowaad siineysa saxiixa xiddig ka ciyaara weerarka dhexe iyadoo batilmaameedka koowaad u yahay Haaland, xiddiga khadka dhexe ka ciyaara ee Declan Rice iyo laacib ka ciyaara difaaca midig sida ay sheegtay The Telegraph.
Wargeyska ayaa intaas ku daray inay Chelsea wada hadallo la yeelatay xiddiga reer Norway wakiilladiisa isla markaasna ay u dhaqaaqi doonto saxiixiisa haddii uu aqbalo inuu usoo dhaqaaqo caasimadda Ingiriiska.
Dhinaca kale, wararka qaar ayaa sheegaya inay kooxda reer England ka qayb gelineyso Tammy Abraham heshiiska ay doonayaan inay Dortmund kaga soo qaadato Erling Haaland.
20-jirkan gooldhaliyaha ah ayaa xiiso ka helaya qaar ka mid ah kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub, waxaana si gaar ah u baacsanaya kooxda Manchester United oo tartan gelin kara naadiga uu hoggaamiyo Macallin Tuchel.
« Sawirro: Wasiir Duraan iyo wafdi booqasho ku tegay safaaradda dalka Itoobiya
‘On a rampage’: the African women fighting to end FGM »